Xiaomi Mi Mix 2S: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | I-Androidsis
IXiaomi Mi Mix 2S sele iyinyani: Yazi zonke iinkcukacha zayo
Ekugqibeleni imini ifikile. Isiphelo sokuqala seXiaomi sele sinikezelwe ngokusemthethweni. Sithetha ngayo Xiaomi Mi Mix 2S. Ifowuni apho sifunde khona ezinye iinkcukacha kwezi veki. Kodwa okokugqibela, sele inikezelwe ngokusemthethweni e-China. Ke sele sizazi zonke iinkcukacha malunga nesiphelo sokuqala sophawu lwesiTshayina lwale 2018.
Sijongene nefowuni elandela umgca ophawulwe ngumanduleli walo nyakenye. Kodwa ngotshintsho oluthile. Imela ukuba yifowuni enamandla kunye nomgangatho. Ukongeza, isakhelo siphinda sime kwakhona ngokuba nescreen ngaphandle kwesakhelo. Yintoni esinokuyilindela kule Xiaomi Mi Mix 2S? Siza kukuxelela yonke into engezantsi.
Kulo msitho wentetho sele sikwazi ukubazi Ukucaciswa ngokupheleleyo kwesixhobo sokugqibela. Ke le fowuni ayisabambeleli kuthi. Kwaye siyabona ukuba asiphoxekanga nganto. UXiaomi ubeka ifowuni esemgangathweni kwakhona. Ukongeza, ngokuqinisekileyo abasebenzisi abaninzi bazolile emva kokubona oko isikrini somnxeba asinayo inotshi. Ikhamera yangaphambili ibuyela emazantsi esixhobo.
1 Ukucaciswa kweXiaomi Mi Mix 2S
Ukucaciswa kweXiaomi Mi Mix 2S
Ndiyabulela kulo msitho wentetho esele siyazi yonke into malunga nesixhobo. Ezi zezi Ukucaciswa ngokupheleleyo kweXiaomi Mi Mix 2S:
Ukucaciswa kobuchwephesha Xiaomi Mi Mix 2S
Umzekelo Umxube wam 2S
Inkqubo yokusebenza I-Android 8.0 Oreo ene-MIUI 9.5
Isikrini I-IPS 5.99 intshi ene-HD epheleleyo + isisombululo kunye ne-18: 9 ratio
Inkqubo I-Qualcomm Snapdragon 845 enee-cores ezisibhozo ezinesantya esiphezulu se-2.8 GHz
Ukugcinwa kwangaphakathi I-64 GB / 128 GB / 256 GB
Ikhamera esemva I-12 MP ye-Sony IMX363 ene-f / 1.8 kunye ne-12 MP ye-Samsung S5K3M3 kunye neferture f / 2.4.
Ikhamera yangaphambili 5 MP ene-f / 2.0 ukuvula kunye ne-ID yobuso be-AI
Conectividad I-NFC GSM LTE-FDD LTE-TDD I-WDCMA TD-SCMA I-Bluetooth 5.0 Uhlobo lwe-C
Ezinye izinto Umva wangasemva wokufunda ngeminwe ye-AI yobuso be-ID yokuqaphela ubuso kuguqulelo olukhawulezileyo olusuka kwikhamera yomncedisi oqinisekileyo
Ibhetri I-3.400 mAh ngokutshaja ngokukhawuleza kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo
Ubukhulu 150.86 x 74.9 x 8.1mm
U bunzima I-189 gram
Ixabiso Ukusuka kwi-429 euro
Siyayibona loo nto UXiaomi ubheje ngamandla ngesi sixhobo. Ubukho beprosesa ye-Snapdragon 845, eyona intle kwintengiso namhlanje, sele sisiqinisekiso soku. Kwakhona, into esele siyazi ngaphambi kokumiliselwa kwesixhobo yile ubukrelekrele bokuzenzela buza kudlala indima ephambili kwi iikhamera zefowuni. Ke silindele lukhulu kwezi khamera, njengoko iXiaomi Mi MIX 2S inayo ukubheja kwakhona kwikhamera ephindwe kabini Ngasemva. I-engile ebanzi kunye nelensi yefowuni.
Enkosi kubukrelekrele bokufakelwa, ifowuni iya kuba nakho ukubona izigcawu zokubamba ngokufanelekileyo ngamaxesha onke. Ukongeza, siya kuba nemowudi enkulu yomzobo kwisixhobo. Ayizukufumana kuphela izigcawu, kodwa iya kuba nayo Ukukwazi ukubona izinto xa sithatha isithombe. Iya kuyikhangela into oyifotayo ukuze wazi ukuba ijolise phi na okanye ukuba kufuneka yenze imvelaphi ifiphale, nefuthe le-bokeh elaziwayo.
Ukongeza, ngokubhekisele kwividiyo, siza kufumana indlela Ukwenza ngokucotha kuphuculwe, Esiza kusivumela ukuba sirekhode kwi-fps ezili-120 kwi-HD epheleleyo nakwi-240 fps kwisisombululo se-720p. Kodwa uyabona ukuba Uphawu lwaseTshayina lukhupha isifuba ngekhamera yesixhobo. Into ebonakala isengqiqweni, kuba luphuculo olukhulu kwimodeli yonyaka ophelileyo. Ukongeza, ukubanakho ukurekhoda ividiyo ebhalwe kwifomathi ye-HEVC -Fight Efficiency Video Codec nayo yazisiwe.
Ukongeza, i Inkqubo yokwamkelwa kobuso kwikhamera engaphambili yale Xiaomi Mi Mix 2S. Iza phantsi kwegama le-ID yobuso be-AI. Ke abasebenzisi baya kuba nenketho yokusebenzisa le ndlela yokuvula ifowuni. Nangona kuthathelwa ingqalelo imeko yekhamera yangaphambili kwifowuni, kuya kuba ngumdla ukubona ukuba isebenza kakuhle okanye ayisebenzi.
Ngokobungakanani, imodeli iyafana kakhulu nefowuni yonyaka ophelileyo. Yimilimitha enkulu kunemodeli yonyaka ophelileyo kwi-axis nganye. Ukongeza, inobunzima obuphakamileyo, le modeli ine-gram ezi-6 ezinzima. Ke umahluko mncinci kule meko.
Enye yeenkcukacha ezivezwe kulo msitho kukuba le IXiaomi Mi Mix 2S iya kuba nenkxaso yenyani eqinisekisiweyo kaGoogle. Ifowuni iya kukuxhasa I-ARCore. Ke iba ngale ndlela enye yeefowuni ezimbalwa kwintengiso ezinokhetho.
Kwakhona kuyaphawuleka uyilo lwesixhobo kunye nealuminiyam kunye nomzimba weceramic. Ukusuka kwinto esinokubona kuyo iinzame zorhwebo lwaseTshayina malunga noku. Ngokukodwa sifumana i-aluminium chassis kunye nomzimba we ceramic kwesi sixhobo.
Nje ukuba sazi yonke into malunga nomnxeba, sinemiba emibini ebaluleke kakhulu ukuyazi. Inkqubo ye- Ixabiso eliza kuthi ngalo le Xiaomi Mi Mix 2S ifike kwimarike kunye nomhla oya kuthi ufike ngawo ezivenkileni. Izolo kubhengezwe ukuba umphathi wenkampani uphawule ukuba ayizukuba yifowuni enexabiso eliphantsi. Ndandinyanisile?
Ifowuni iza kufika kwiinguqu ezahlukeneyo kwimarike. Enye yazo ine-6 ​​GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina, enye ine-6 ​​GB kunye ne-128 GB yokugcina kunye neyokugqibela ene-8 GB kunye ne-256 GB yokugcina. Elowo uya kuba nexabiso elahlukileyo.
El Xiaomi Mi Hlanganisa 2S kunye ne-6GB + 64GB uya kubizwa amaxabiso nge-3299 yuan (malunga 420 euro)
IXiaomi Mi Mix 2S ene-6 GB + 128 GB iya kubiza endaweni yoko I-3599 yuan (malunga nee-euro ezingama-459)
I-Xiaomi Mi Mix 2s ene-8 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yokugcina iya kuba nexabiso nge I-3999 yuan (malunga nee-euro ezingama-509) iyakubandakanya itshaja yasimahla engenazingcingo
Ifowuni iya kuthengiswa ukusuka nge-3 ka-Epreli. Okwangoku siyazi ukuba izakufumaneka ngombala omnyama nomhlophe, nangona kunokubakho eminye imibala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi Mix 2S sele iyinyani: Yazi zonke iinkcukacha zayo
URoberto Cacho Martinez sitsho
Umhlobo we-Androidsis… Ngaba i-HD epheleleyo okanye i-Amoled screen?
Phendula URoberto Cacho Martinez
Uyibona njani intetho kaHuawei bukhoma, udibana neHuawei P20, iP20 Pro, iP20 Lite kunye nokunye
IHuawei yeyona nto ithengiswa kakhulu eSpain ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka